Sacuudiga Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Sacuudiga'
Maxaweyne Farmaajo oo Dowladda Sacuudiga ka Codsaday Inay soo kala Dhex Gasho iyaga iyo Dowladda Imaaraadka
February 27, 2017 – Wakaaladda wararka ee Yalla Afrika ayaa shaacisay inuu Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/llaahi Farmaajo uu Dhaxalsugaha dalka Sacuudiga, Amiir Maxamed Salmaan Bin C/casiis ka codsaday inuu gacan ka geysto Dhexdhexaadinta muranka Dekedda Berbera ee soo kala dhexgalay dalalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Farmaajo oo Khamiistii hore booqashadiisii ugu horeysay ku …
Qaabkii Madaxweyne Farmaajo Loogu soo Dhaweeyay Dalka Sacuudiga (SAWIRRO)
February 24, 2017 – Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa weli booqasho rasmi ah ugu sugan dalka Sacuudi Carabiya , waxaana maanta lagu wadaa isaga iyo tiimkiisa inay cumreystaan, kahor inta aanu booqan Magaalada Madiina Al-munawara oo uu ku yaallo Qabriga Nabigeena Muxamad (NNKH). Farmaajo ayaa si toos ah ugeli doona Kacbada, isagoo …
February 23, 2017 – Wararka inaga soo gaaraya dalka Sacuudiga ayaa sheegaya in Boqorka dalka Sacuudiga, Boqorka Salmaan Bin C/casiis iyo Madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane, Maxamed C/llaahi Farmaajo ay maanta qaateen kulan Rasmi ah. oo ka dhacay qasriga Al-yamaamah. Kulankani ayaa waxaa la soo sheegayaa in looga hadlay Iskaashiga u dhaxeeya Labada dal iyo Dhacdooyinka …
Weerar Xoogan oo Loo Adeegsaday Laba Qarax oo Maanta ka Dhacay Dalka Sacuudiga (VIDEO)
January 21, 2017 – Wararka inaga soo gaaraya magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegaya in magaaladaasi uu maanta ka dhaceen iyo qaraxyo kadib markii ciidamada amaanka ay weerareen guri kuyaala magaaladaasi. Ciidamada la dagaalanka argagaxisada ee Boqortooyada Sacuudiga ayaa la sheegayaa in ay weerareen oo iskuna gadaameen guri kuyaala magaaladaasi Jeddah, waxaana la …
Madaxweynaha Soomaaliya oo Maanta Safiirka Sacuudiga Waraaqihii Safiirnimo ka Gudoomay (SAWIRRO)
January 18, 2017 – Madaxweynaha Soomaaliya Mudane, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta warqadaha aqoonsi ee danjirenimo ka guddoomay safiirka cusub ee Boqortooyada Sacuudiga u soo magcaabdey dalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xafiiskiisa ku soo dhoweeyey Safiirka cusub ee Boqortooyada dalka Sacuudiga Dr. Mohamed Abdi-kani Al-Khayat, isagoo halkaasi uga gudoomay warqadaha aqoonsiga ee safiirnimo kaddib …
Shaqaalihii Soomaalida oo Dhawaan loo Qaadi Doono Dalka Sacuudiga
January 02, 2017 – Soomaaliya ayaa dhawaan ku tala jirta inay 10,000 oo shaqaalo Soomaali ahi u dhoofiso dalka Sacuudiga, kuwaasi oo si sharciyeysan kaga shaqeyn doono guryaha iyo magaalooyinka dalkaasi Sacuudiga. Dowladdaha Sacuudiga iyo tan Soomaaliya ayaa horey ugu heshiiyay in shaqaalahaasi oo u badan (Booyaasooyin) la geeyo dalka Sacuudiga si ay kaga shaqeystaan …
Sacuudiga iyo Xulufadiisa oo Lagu Eedeeyay Inay Duqeeyeen Xabsi ku yaal Dalka Yemen (VIDEO)
October 30, 2016 – Diyaaradaha xulufada ee uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa duqeyn dhanka cirka ah waxa ay u gaysteen sida la soo sheegayo xabsi ku yaalo Magaalada Xudayda ee ku taalo Galbeedka dalka Yemen. Wararka ayaa intaa ku daraya in goobaha la duqeeyay ay ahaayeen goobo ay ku noolyihiin dad Shacab ah iyo goobo ay xabsi …
Dowladda Sacuudiga oo Sheegtay in Lagu soo Weeraray Gantaalaha Ridada Dheer (VIDEO)
October 28, 2016 – Boqortooyada Sacuudi Caraabiya ayaa sheegtay in dalkeeda lagu soo weeraray gantaal ah kuwa ridada dheer, waxayna weerarkan ku eedeesay Jabhadda Shiicada ah ee Xuutiyiinta dalka Yemen. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in gantaalkani laga soo tuuray xadka dalka Yemen, kuna soo dhacay meel magaalada Barakeesan ee Makka u jirta 60km, waxana ay …